मनोरंजन – Annapurna Post News
May 27, 2022 sujaLeaveaComment on पल शाहकै कानुन व्यवसायीको आग्रहमा आज हुने मुद्दाको सुनुवाई फेरि सर्‍यो
नाबालिग कर णीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पल शाहको मुद्दामा आज सुनुवाई नहुने भएको छ । उच्च अदालत पोखरामा बिहीबारको लागि पेशी तोकिए पनि सुनुवाई स्थगित भएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र श्रीधरा कुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । शाहका कानुन व्यवसायीको निवेदनपछि सुनुवाई स्थगित गरिएको हो । यो […]
आलोचना गर्ने बिरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने करिश्मा मानन्धरको तयारी !
May 26, 2022 sujaLeaveaComment on आलोचना गर्ने बिरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने करिश्मा मानन्धरको तयारी !
काठमाडौं । अभिनेत्री तथा नेकपा एमाले नेत्री करिश्मा मानन्धरले आफूलाई गाली गर्नेहरुको विरुद्ध कानुनी बाटो रोज्ने चेतावनी दिएकी छन् । हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेले राम्रो परिणाम ल्याउन नसकेको विषयमा उनलाई जोडेर विभिन्न नकारात्मक टिप्पणी आउन थालेपछि उनले सामाजिक संजालमार्फत आलोचकलाई चेतावनी दिएकी हुन् । जीवनमा कसैको नराम्रो नचिताएको, कसैको नराम्रो नगरेको र आफूसँग […]
May 23, 2022 sujaLeaveaComment on गायिका अस्मिता अधिकारी प्रेममा परेकि नै हुन् त ?
काठमाडौं । प्रेम यस्तो विषय हो जुन लुकाएर लुक्नै सक्दैन । ग्ल्यामर क्षेत्रको चर्चा गर्ने हो भने अझ देखाउने प्रेमको नै बजार बढी छ । अपवादलाई छोडेर हेर्ने हो भने एकै क्षेत्रका दुई युवाको प्रेम त झन् छिटो फैलिन्छ । चैते डढेलो झै ! संगीतकर्मीद्वय अस्मिता अधिकारी र महेश काफ्लेको प्रेमको चर्चा चलिरहेको छ । […]
May 22, 2022 sujaLeaveaComment on पलको घटनामा पलको पक्षमा उभिएकी पूजाले ब्युटी पेजेन्टमा बालत्कृत किशोरीलाइ साथ दिँदा आलोचना
काठमाडौं । ब्युटी पेजेन्टको नाममा बलात्कार भएको घटनामा अहिले धेरैले बोल्न थालेका छन् ।पीडितको समर्थनमा अहिले अभिनेत्री पूजा शर्माले पनि उत्रिनु भएको छ । शर्माले सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै ती युवतीलाई अगाडि बढेर पीडकको वास्तविकता बाहिर ल्याउन अनुरोध गर्नुभएको हो । सन् २०१४ मा एक किशोरीले आफू बलात्कृत भएको भन्दै बाहिर आएपछि अहिले हंगामा […]
गर्मीसँगै पोखरा पुगेरर खुलिन् एलिजा ! हेर्नुस् १० तस्बिर
May 18, 2022 sujaLeaveaComment on गर्मीसँगै पोखरा पुगेरर खुलिन् एलिजा ! हेर्नुस् १० तस्बिर
एलिजा गौतम चलचित्र अनुरागबाट नेपाली फिल्ममा डेब्यु गरिन् । आफैले निर्माण उक्त फिल्म चल्न सकेन तर एलिजाको चर्चा भने राम्रै भयो ।१८ वर्षको उमेरमा उनले आफूभन्दा १७ वर्ष जेठा व्यक्तिसँग लगनगाँठो कसिन् । त्यसपछि उनी रंगिन दुनियाँमा लागेकी छन् । उनी सामाजिक संजालमा पनि निकै सक्रिय छन् । पछिल्लो समय उनले बोल्ड तस्विरहरु सामाजिक सञ्‍जालमा […]
सन्नी लियोनीको बंगलाको मूल्य थाहा पाउँदा सबै चकित
May 16, 2022 sujaLeaveaComment on सन्नी लियोनीको बंगलाको मूल्य थाहा पाउँदा सबै चकित
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी आफ्नो काममा निकै सक्रिय छिन् । उनी आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि रमाइलो समय निकाल्छिन् । अभिनेत्री परिवारसँग समय बिताउन रुचाउँछिन् । उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो व्यक्तिगत र व्यावसायिक जीवनको बारेमा फ्यानहरूलाई सधैं अपडेट राख्छिन् । अभिनेत्रीले गत वर्ष मुम्बईमा विलासी अपार्टमेन्ट लिएकी थिइन् । यसको मूल्य धेरै उच्च थियो। […]
May 15, 2022 sujaLeaveaComment on फ्यानको धड्कन बढाउने सुरविना कार्कीका ताजा ‘बोल्ड’ अवतार [ फोटो फिचर ]
काठमाडौ । नायिका सुरविना कार्की आजभोलि फिल्म क्षेत्रमा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय छिन् । नेपाली दर्शकले उनलाई फिल्म ‘लप्पन छप्पन २’ मा देख्न पायो । त्यसपछि खासै देखिएकी छैनन् । उक्त फिल्ममा सुरविनाको शीर्ष भूमिका थियो । फिल्मका अलावा सुरविना सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गर्ने बोल्ड तस्वीरका कारण पनि चर्चामा रहन्छिन् । उनले सामाजिक सञ्जाल […]
काठमाडौँ । पछिल्ल दिनमा नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह कता छिन् ? यो प्रश्न आम दर्शकको हो । फिल्म ‘ड्रिम्स’बाट रजतपटमा उदाएकी यी सुन्दरीले त्यसपछि राम्रो चर्चा त कमाईन् तर पछिल्ला दिनमा उनी गुमनाम जस्तै बन्दै गइरहेकी छिन् । भुवन केसी विरुद्ध ‘मिटु’को आरोप लगाउँदा मिडियामा छाएकी यी सुन्दरी पछिल्ला दिनमा कोरोनापछि कता छिन् भन्ने प्रश्न […]
May 12, 2022 sujaLeaveaComment on ओशो तपोवनमा ‘यौन’ फ्रि हो ? यसो भन्छन्- अभिनेत्री नम्रता र सोभिता (भिडियो)
एक अन्तर्वार्तामा अभिनेत्री नम्रता सापकोटा र सोभिता सिंखडा खुबै खुलेर कुरा गरेका छन् ।उनीहरुले ओशो तपोवनमा के–के हुन्छ भन्ने खुलाएका छन् । उनीहरु दुबै ओशो सन्यासी हुन् । तपोवनमा गएर ध्यानमा बस्छन् । सोभिता त पूर्ण रुपमा त्यही नै बस्छिन् । ओशो समुदाय के हो ? त्यहाँ के–के हुन्छ भन्ने कुरा अलिक बढी सोभिताले खुलाएकी […]
अभिनेत्री उर्वशीले लगाएको ६४ करोड लेहंगा कस्तो हो, किन छ यति धेरै चर्चा?
May 12, 2022 sujaLeaveaComment on अभिनेत्री उर्वशीले लगाएको ६४ करोड लेहंगा कस्तो हो, किन छ यति धेरै चर्चा?
काठमाडौं। उर्वशी रौटेला बलिउडको एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हुन्। उनी आफ्नो महँगो फेसनका कारण चर्चामा रहने गरेकी छिन् ।फ्यानहरू उनको फेसन मन पराउँछन्। हालै, जब उनले र्याम्पमा सुनौलो गाउन लगाइन्, फ्यानहरूले प्रशंसा गरेका थिए। अब उनी नयाँ पोशाकमा देखा परेकी छिन्। नयाँ पोशाकमा पनि उनी एकदम सुन्दर देखिएकी छिन्। उर्वशी रौतेलाले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा एउटा भिडियो […]